Music Khabar सागरले यसरी पाउँदैछन् ५० लाख ! - Music Khabar
Home » Image slider » सागरले यसरी पाउँदैछन् ५० लाख !
सागरले यसरी पाउँदैछन् ५० लाख !
भाद्र २६, काठमाडौं । सागर आले मगरलाईलाई सहयोगको ओहिरो लागि रहेको छ । यो संगै सांगीतिक यात्राका लागि सागर आले मगर ८ ओटा देशको भ्रमण गर्दै छन् । यसले प्रतिभा भएपछी कुनै आइडल नजितेपनि फरक पर्दैन भन्ने देखाएको छ ।
एपि वान टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने नेपालकै उत्कृष्ट रियालिटि शो “नेपाल आइडल” को टप ४ बाट बाहिरिएका प्रतिस्पर्धी सागर आलेलाई सिंगापुरबाट आर्थिक सहयोग गरिएको छ। धरान निवासी हाल सिंगापुरमा रहेकी जेदिन लिम्बूले सागर आलेको नाममा रहेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खाता नम्बर ००१०५०३०२५०५६६ मा नगद रु.एक लाख जम्मा गरेकी छिन् ।